Zviri pamutemo, Harmony OS ichave iri default OS yezvigadzirwa zvitsva zveHuawei | Linux Vakapindwa muropa
Zviri pamutemo, Harmony OS ichave iri default OS yezvigadzirwa zvitsva zveHuawei
MuHDCC 2020, Huawei yakafukurwa kuburikidza nechiziviso iyo kuwedzera kwezvirongwa zve iyo nyowani yekushandisa system yawanga uchishandira "Harmony OS" yakaziviswa gore rapfuura.
Pamusoro pezvakatanga kuziviswa zvishandiso zvinotakurika neInternet yezvinhu (IoT) zvigadzirwa senge zvinoratidzwa, zvishandiso zvinopfeka, maspika akangwara, uye masisitimu emota ruzivo, iyo yekushandisa iri kuvandudzwa izvi zvinoshandawo kune mafoni.
Iyo SDK bvunzo kuvandudza nharembozha dzeHarmony ichatanga pakupera kwa2020, uye mafoni emafoni ekutanga zvichienderana nehurongwa hutsva hwekushandisa akarongerwa kuvhurwa kusvika kota yekupedzisira yegore rinouya, kureva kuti, kana zvinhu zvikafamba zvakanaka tinogona kuona mhedzisiro muna Gumiguru 2021
Zvinosimbiswa kuti eIyo itsva OS ikozvino yakagadzirira IoT zvishandiso zvine RAM kubva ku128KB kusvika ku128MB uye yakanga ichishanda zvekuti muna Kubvumbi 2021 ichatanga kusimudzira sarudzo yemidziyo yekuyeuka kubva 128MB kusvika 4GB uye muna Gumiguru zvemidziyo ine inopfuura 4GB ye RAM.
Rangarira kuti chirongwa cheHarmony chave kuvandudzwa kubvira 2017 uye iri microkernel inoshanda sisitimu iyo inogona kuoneka semukwikwidzi kuGoogle's Fuchsia inoshanda system.
Iyo chikuva ichaburitswa mukodhi kodhi seyakazara yakavhurwa sosi purojekiti ine yakazvimirira manejimendi (Huawei iri kutogadzira yakavhurika LiteOS yeIoT zvishandiso).
Iyo kodhi yepuratifomu ichapihwa kuChina Open Atomic Open Source Foundation, sangano risingabatsiri.
Huawei anotenda kuti Android haina kunaka kune nharembozha nekuda kwekusafanira kwakakura kodhi, yechinyakare maitiro ekuronga, uye nyaya dzekuparadzanisa papuratifomu.
Mukati meakadzama maficha eHarmony OS, anotevera:
Iko musimboti weiyo sisitimu inosimbiswa pane yakasarudzika logic / math pamwero kudzikisira njodzi yekukuvara. Iko kuongorora kwakaitwa pachishandiswa nzira dzinowanzo shandiswa mukukanganisa sisitimu kuvandudza munzvimbo dzakaita sendege uye muchadenga, uye inogona kuzadzikisa EAL 5+ chengetedzo nhanho kutevedzera.
Iyo micronucleus yakasarudzika kubva kune ekunze zvigadzirwa. Iyo sisitimu yakabviswa kubva kune Hardware uye inobvumira vanogadzira kuti vagadzire zvinoshandiswa izvo zvinogona kushandiswa pazvikamu zvakasiyana zvemidziyo pasina kugadzira akapatsanurwa mapakeji.
Iyo microkernel inongoshandisa iyo scheduler neIPC, uye zvimwe zvese zvinoendeswa pamusoro peiyo system services, mazhinji acho anomhanya mushandisi nzvimbo.
Semurongi wemabasa, injini yekufungidzira latency inokurudzirwa, inoongorora mutoro munguva chaiyo uye inoshandisa nzira kufanofungidzira maitiro echishandiso. Zvichienzaniswa nemamwe masisitimu, murongi anowana 25,7% kudzikira mu latency uye kuderedzwa kwe55,6% mu latency jitter.
Kupa kutaurirana pakati peiyo microkernel neyekunze kernel masevhisi senge iyo faira system, network stack, madhiraivha, uye application kuvhura subsystem, IPC inoshandiswa, iyo zvinoenderana nekambani iri kukurumidza nekashanu pane IPC muZircon uye katatu nekukurumidza kupfuura IPC mu QNX.
Panzvimbo pekushandisa anowanzo shandiswa mana-layer protocol kutapudza pamusoro, Harmony inoshandisa yakareruka imwechete-musara modhi yakanangana nebhazi rakaparadzirwa iro rinotaurirana nemidziyo yakadai sekuratidzira, makamera, makadhi eruzha, nezvimwe zvakadaro.
Iyo sisitimu haina kupa mushandisi kuwana padanho remidzi.
Uyewo, kukwanisa kugadzira mafomu emakirasi akasiyana emidziyo, senge materevhizheni, nhare dzakangwara, mawadhi akangwara, masisitimu emota ruzivo, nezvimwe, Huawei akataura kuti ichapa chimiro chepasirese chekuvandudza nzvimbo uye SDK ine inosanganisirwa nzvimbo yekuvandudza.
Toolkit inozo gadziridza mashandisiro acho kune akasiyana masikirini, zvinodzora uye nzira dzekudyidzana kwevashandisi. Inotaura zvakare nezvekupihwa maturusi eHarmony kuchinjisa zviripo zveApple maapplication neshanduko diki.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Zviri pamutemo, Harmony OS ichave iri default OS yezvigadzirwa zvitsva zveHuawei
Raccoon: kutambura muTLS iyo inobvumidza kuseta kwemakiyi eDH kubatana
Mobian uye Arch Linux ARM: Maitiro ekuisa ekutanga mamwe masisitimu anogona kushandiswa paPineTab nenzira YEMAHARA